CFD amin'ny IQOption - FX (Forex) IQOption - fampianarana, famerenana sy hevitra
Mety hampidi-doza ny renivohinao
Fanadihadiana amin'ny fotoana tena izy
Vaovao momba ny mpivarotra
Vaovao momba ny programa Affiliate
Vaovao IQoption & torohevitra
IQOption » Vaovao IQoption & torohevitra » CFD amin'ny IQOption - FX (Forex) IQOption - fampianarana, famerenana sy hevitra
Fifanakalozana CFD's & FX amin'ny IQ OPTION– famerenana
Dingana 5 hifanakalozana Forex amin'ny IQOption:
Ny CFD an'ny IQ OPTION– inona izany?
CFD's (Fifanarahana ho an'ny fahasamihafana) amin'ny IQOption
Ireto misy lohahevitra hodinihinay:
Ahoana ny fomba hanombohana ny fifanakalozana CFD (Fifandraisana ho an'ny fahasamihafana) amin'ny IQ OPTION– tutorial (horonan-tsary)
Ahoana ny fomba hanombohana ny varotra FX (Forex) amin'ny IQ OPTION– tutorial (horonan-tsary)
Ahoana ny fomba hahombiazana amin'ny varotra Forex & CFD amin'ny iqoption.
Fifanakalozana CFD's & FX amin'ny IQ OPTION- famerenana
Raha ny tena izy, Forex dia tsena marin-toerana misy ny mpivady vola izay mihetsika amin'ny vaovao manerantany, ny hetsika ary ny politika ara-toekarena. Ity fitaovana varotra malaza eran-tany ity dia azo idirana tanteraka amin'ny IQ Option, izay fanao mahazatra amin'ny fanatsarana maro.
Forex varotra amin'ny IQ OPTIONsehatra, manana tombony maro ny mpivarotra:
Aza mamoy mihoatra ny vola natokananao tamina toerana iray (CFD voaaro)
24 ora isan'andro, 5 andro isan-kerinandro
Kaonty fampiharana 10.000 EUR / USD azo alaina maimaim-poana (miankina amin'ny vola amin'ny kaontinao)
1: 300 leverage misy **
Miely mafy, tsy misy kaomisiona
Tombom-bola tsy voafetra
Vaovao sy ny famotopotorana ny fotoana tena izy amin'ny sehatra avo indrindra raha toa ka azon'ny mpivarotra tsy za-draharaha
Ny varotra amin'ny tsena be ranoka indrindra eto an-tany
Mpivarotra vola ambony
* Afa-tsy an'i Sina
** Ny multiplier Default dia 50. Raha te hangataka x300, ny mpivarotra dia tsy maintsy mahazo isa naoty sahaza. Ny fameperana leverage dia mety mihatra arakaraka ny toe-javatra misy ny mpanjifa sy / na ny faritra misy azy.
Azafady mba zahao foana ireo teny misy amin'izao fotoana izao amin'ny tranonkala ofisialy. Ny voalaza etsy ambony dia amin'izao fotoana izao hatramin'ny 08/2017
IQ OPTIONnanangana CFD (Contract for Difference) sy FX (Forex trading). Vaovao mahafaly ho an'ny mpivarotra sy IQ OPTIONmpiara-miasa. Mety ho traikefa tena tsara ny fifanakalozana Forex na CFD IQ OPTIONmalaza ambany ambany takiana.
Vola varotra, tahiry mahomby indrindra, Bitcoins ary Ethereum
MAIMAIM-POANA NY komisiona * (* fehezan-dalàna momba ny serivisy ampiharina)
Safidy fanakatonana mandeha ho azy
Trade on the price changes of the world’s top-performing stocks for a fraction of the asset’s price.
Misy koa vaovao IQ OPTIONfampiharana ho an'ny iOS novolavola izay mamela ny varotra amin'ny Forex, CFD ary cryptocurrency!
Official IQ OPTIONfanambarana momba izany:
"Ao anatin'ny 2 volana dia handefa CFD sy FX amin'ny sehatra mahafinaritra izahay ary hanavao ny tranokalanay. Betsaka koa ny zavatra ho avy… ”
Ny CFD dia mandeha IQ OPTION- inona iny?
Mety manontany tena ianao hoe inona izany Fifanarahana ho an'ny fahasamihafana (CFD) ary raha IQoption araho ny làlan'ny brokers hafa izay nanova ny anarany ny sehatra Binary options ary nanomboka nanolotra fitaovana Forex sy CFD.
Fa nahoana izany? Toa nahazo safidy ratsy be ny Safidy Binary tato ho ato ary misy ny faneriterena mifehy ka dia nanolotra fitaovana vaovao hijanona amin'ny asa aman-draharaha ireo broker.
Amin'izao fotoana izao dia fantatsika izany IQ OPTIONhanolotra CFD.
Araho tsara izany.
Ity misy famaritana ny fifanarahana ho an'ny fahasamihafanaFifanarahana ho an'ny fahasamihafana avy amin'ny Wikipedia.
Ahoana ny fomba hanombohana ny varotra CFD's (Contract ho an'ny fahasamihafana) amin'ny IQ OPTION- tutorial (horonan-tsary)
Ahoana ny fomba hanombohana ny varotra FX (Forex) amin'ny IQ OPTION- tutorial (horonan-tsary)
Ankoatry ny famerenana sy ny lesona dia manandrana mizara torohevitra vitsivitsy izahay, ny vaovao ary ny hevitray (sy ireo mpivarotra hafa) momba ny varotra CFD sy Forex amin'ny IQOption. Araho hatrany.
Tonga ny fanovana mahaliana IQ OPTIONsehatra.
AZA HADINO FA: Ireo lahatsoratra ao amin'ity tranonkala ity dia tsy torohevitra momba ny fampiasam-bola. Ny firesahana momba ny fivezivezena na ny haavon'ny vidin'ny tantara dia fampahalalana ary mifototra amin'ny fanadihadiana ivelany ary tsy manome antoka izahay fa hisy hetsika na ambaratonga toy izany mety hiverina indray amin'ny ho avy.
Mifanaraka amin'ny fepetra napetraky ny European Securities and Markets Authority (ESMA), ny varotra amin'ny safidy binary sy nomerika dia ho an'ny mpanjifa sokajiana ho mpanjifa matihanina ihany.
Ny sasany amin'ireo rohy eto amin'ity pejy ity dia mety ho rohy mpampifandray. Midika izany fa raha tsindrio ny rohy sy ividiananao ilay entana, dia hahazo komisiona iray aho.
Fifanarahana minimum $ 1
$ 10 Tahiry ambany indrindra
Kaonty Demo maimaim-poana
← Mihantona ny fifamoivoizana StockPair - fiovana eo amin'ny asan'ny orinasa Fampianarana sy antontan-taratasy DIVI vaovao →
Araka ny takian'ny European Securities and Markets Authority (ESMA), ny safidy mimari-droa sy ny fifanakalozana safidy an-tserasera dia ho an'ny mpanjifa mahafeno fepetra ho matihanina ihany.
Zahao ny demo maimaim-poana miaraka amin'ny $ 10,000
Fampitandremana amin'ny loza: mety hampidi-doza ny renivohinao
Lisitry ny firenena voarara ao amin'ny IQOPTION - voarara
IQOption Robot - rafitra rindrambaiko autotrading IQ-Bot
Maninona no nosakanana / nampiato ny kaontiko IQOption ary tsy afaka miditra aho
Ahoana ny fomba fametrahana petra-bola IQOption amin'ny kaonty Neteller tsy misy hadisoana?
Fifaninanana IQOPTION - ny fomba varotra sy hahazoana loka
Fandaharam-pifaneraserana IQOption, misoratra anarana, fizarana vola, komisiona CPA, fidirana
Ahoana ny fifanakalozana safidy FX? (01:44)
Ity fitaovana ity dia ahafahanao mivarotra mpivarotra vola amin'ny fe-potoana fohy (60 min). Ny tampony ambony, raha toa kosa ny fatiantoka dia miankina amin'ny fampiasam-bola voalohany.
Ahoana ny fifanakalozana CFD? (00:49)
Ity fitaovana ara-bola ity dia ahafahanao manombatombana amin'ny hetsika miakatra sy miakatra ny vidin'ny tahiry nefa tsy manana izany akory.
Ahoana ny fifanakalozana safidy binary *? (01:22)
Maminany izay lalana hitondrana ny vidin'ny fananana afaka minitra vitsy. Tombony hatramin'ny 95%, miaraka amin'ny fatiantoka voafetra amin'ny vola ampidirinao. (* Ny safidy mimari-droa dia tsy misy ao amin'ny UE)
Forex. Ahoana no hanombohana? (01:01)
Ny tsena lehibe indrindra sy be ranoka indrindra eto an-tany izay fananana lehibe madiodio dia ny vola vahiny mpivarotra tsiroaroa. Hijery horonan-tsary hahalala bebe kokoa.
Kalandrie toekarena - hetsika lehibe
Famintinana ny fanadihadiana ara-teknika amin'ny fotoana tena izy
TANDREMO NY INVESTASIASA INDRINDRA:
Ny CFD dia fitaovana sarotra ary atahorana ho very vola haingana noho ny fampiasana. Eo anelanelan'ny 74-90% ny kaontin'ny mpampiasa vola antsinjarany very vola rehefa mivarotra CFD. Tokony hoeritreretinao raha azonao ny fomba fiasan'ny CFD sy ny fahafahanao miatrika risika be amin'ny famoizana ny volanao.
Azafady mba ambarao fa ny vokatra sasany sy / na ny ambaratonga azo ampitomboina dia mety tsy ho an'ny mpivarotra avy amin'ny firenena EEA noho ny fameperana ara-dalàna.
Araka ny takian'ny European Securities and Markets Authority (ESMA), ny varotra safidy binary sy nomerika dia tsy azon'ny mpanjifa mahay toa ny mpanjifa matihanina ihany.
18+ ihany ny fitaovana fampiroboroboana an'ity tranonkala ity. Azafady miaraha varotra / miloka tompon'andraikitra.
Cookies & Politikan'ny tsiambaratelo
Fandaharana Affiliate IQOption
Antsipirian'ny fifandraisana ofisialy IQ Option:
Fampiharana IQ Option ao amin'ny Apple Store sy Google Play Store
BANNERS IQ OPTION
Kaonty demo IQ Option | Hiditra
Hadisoana IQ Option - 404, 2503
Sokafy ny kaonty demo
Sokafy ny fisoratana anarana amin'ny kaonty demo
Vata famintinana ara-teknika ara-potoana
IQoptions.eu dia tsy tranokala iqoption.com ofisialy. Ny mari-pamantarana rehetra ampiasaina dia an'ny iqoption.com. IQOptions.eu dia tranonkala mifandraika ary mandroso iqoption.com. Mahazo komisiona isika rehefa misoratra anarana amin'ny alàlan'ny rohy ny mpivarotra.
Fandikana lahatsoratra mandeha ho azy
Amin'ny teny anglisy ny lahatsoratra. Azafady mba ovao ny fiteny raha toa ka tsy adika tsara ny lahatsoratra momba ny varotra. Navadika ho azy izy ireo ary mety tsy hitaratra ny hevitry ny atiny voalohany.
Mampiasa cookies izahay hanomezana sy hanatsarana ny serivisinay. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny tranokalanay, dia manaiky ny cookies ianao. Raha te hahalala bebe kokoa dia vakio ny politikanay etsy ambany:
Fifandraisana sy fanampiana
Manodidina ny 74-89% ny kaontin'ny mpampiasa vola antsinjarany very vola rehefa mifanakalo CFD amin'ireo mpamatsy ireo. Tokony hoheverinao raha afaka miatrika risika be ianao amin'ny famoizana ny volanao.
Araka ny takian'ny European Securities and Markets Authority (ESMA), ny varotra safidy binary sy nomerika dia tsy azon'ny mpanjifa efa matihanina ihany.
Fampitandremana amin'ny risika ankapobeny: Ireo serivisy ara-bola atao dokambarotra amin'ity tranonkala ity dia miteraka risika avo lenta ary mety hiteraka fatiantoka amin'ny volanao rehetra. Tsy tokony hampiasa vola tsy ho zakanao mihitsy ianao.
iqoptions.eu dia tsy tranonkala iqoption.com ofisialy.
aza hadino fa: Tsy torohevitra momba ny fampiasam-bola ireo lahatsoratra ao amin'ity tranonkala ity. Ny sasany amin'ireo rohy ao amin'ny paositra na pejy etsy ambony dia mety ho rohy mpiara-miasa. Midika izany fa raha tsindrio ny rohy sy ividiananao ilay entana, dia hahazo komisiona iray aho.
© 2021 - IQ OPTION BROKER - tsy ofisialy | Promotional material on this website is 18+ only. Please trade/gamble responsibly.
Fampitandremana amin'ny risika ankapobeny: Ireo serivisy ara-bola atao dokambarotra amin'ity tranonkala ity dia miteraka risika avo lenta ary mety hiteraka fatiantoka amin'ny volanao rehetra. Tsy tokony hampiasa vola tsy ho zakanao mihitsy ianao
Manodidina ny 74-89% ny kaontin'ny mpampiasa vola antsinjarany very vola rehefa mifanakalo CFD amin'ireo mpamatsy ireo. Tokony hoheverinao raha afaka miatrika risika be ianao amin'ny famoizana ny volanao. | Copyright © 2021 | Zo rehetra voatokana
Mety hitera-doza ny renivohinao